အင်တာဗျူးသွားကြမယ် (၄) – အလုပ်လျှောက်လွှာနဲ့ ကိုယ်ရေးရာဇဝင် ပြင်ဆင်ခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » အင်တာဗျူးသွားကြမယ် (၄) – အလုပ်လျှောက်လွှာနဲ့ ကိုယ်ရေးရာဇဝင် ပြင်ဆင်ခြင်း
Posted by ဇီဇီ on Mar 31, 2013 in Community & Society, Facebook, Interviews & Profiles, Jobs & Careers | 25 comments
အင်တာဗျူးသွားကြမယ် (၁) http://myanmargazette.net/168825
အလုပ်မရှာခင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမဲ့ အရာ ၅ ခု
ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်လေးကိုတော့ သပ်သပ်ရပ်ရပ်၊ သားသားနားနားလေး ပြင်ဆင်ထားသင့်ပါတယ်။
ဖြစ်ကတဲ့ဆန်း ကိုယ်ရေးရာဇဝင် တစ်စောင်ကို ဘယ်အလုပ်ရှင်ကမှ ဒုတိယအကြိမ်ပြန်မကြည့်ပါဘူးတဲ့။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ CV လေးကိုတော့ အမြင်တင့်တယ်အောင်၊ ရှင်းလင်းအောင် ပြင်ဆင်ထားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်တဲ့။
(ပြောရရင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ကို အလုပ်တစ်ခုရပြီးကတည်းက ဖင်ထိုင်နေတာ CV ကောင်းကောင်းမပြင်ရသေးဘူးရယ်။ ဟီး။ အကျယ်ကို နောက်ရေးတဲ့အထဲမှာဆက်ရေးပါ့မယ်။)
၂) LinkedIn Profile
(ဒါက ကိုယ်တိုင်ဘာမှန်းမသိလို့ ဝီကီလိုက်ရပါတယ်။ LinkedIn ဆိုတာ Professional Occupation အတွက် World’s largest Social Network တစ်ခုပါတဲ့။ http://en.wikipedia.org/wiki/LinkedIn မှာဖတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။)
အဲဒီမှာရှိတဲ့ ကိုယ့် ပရိုဖိုင်း ဟာလည်း အရေးကြီးပါတယ်တဲ့။ ကိုယ်ရဲ့ လူအများနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်မှု နဲ့ ပရိုဖိုင်း ကနေ အလုပ်ရှင်တွေက တွေ့နိုင်ဖို့ အလားအလာရှိလို့ပါတဲ့။ လက်ရှိအခြေအနေကို အမြဲ Update လုပ်ပါရန်တဲ့ဗျာ။
၃) Cover Letter
အလုပ်လျှောက်မယ်ဆို ကိုယ်ရေးရာဇဝင်များရေးမယ်ဆိုရင် စပြင်ဆင်ရမဲ့စာပါတဲ့။
(ကျနော် မြန်မာပြည်မှာနေတုန်းက ဒီ Cover Letter ရေးရတယ်ဆိုတာမသိဘူးရယ်။ လိုအပ်တယ်လည်းမသိဘူး။ CV ဆိုရင်ကို မိတ္တူကူးဆိုင်မှာ ဝယ်လို့ရတယ်ပဲသိတာ။ ပြီးရင် အကျယ်ရှင်းလင်းချက်လာပါ့မယ်။)
၄) ကိုယ်ရှာတဲ့ အလုပ်စာရင်းလုပ်ထားရန်
အလုပ်စရှာရာကနေ အဖြစ်အပျက်အစအဆုံးကို လွယ်လွယ်ကူကူပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်အောင် စာရင်းပြင်ဆင်ထားပါတဲ့။
(ဒီလိုလေ။ ကိုယ် အလုပ်ရှာတော့မယ်ဆိုရင် စာရင်းလေးလုပ်ထားရတာပေါ့။ ကိုယ်က အွန်လိုင်းတွေ့သမျှ၊ သီတင်းစာထဲ တွေ့သမျှ အလုပ်၊ ကိုယ်နဲ့ ကိုက်ညီတာမှန်သမျှ အကုန်လျှောက်မှာဆိုတော့ကာ၊
အလုပ်ရှာတဲ့ လုပ်ငန်းမစခင်ဇယားလေး အရင် ဆွဲထားလိုက်။
– လျှောက်မဲ့ ကမ်ပနီ
– ဆက်သွယ်ရမဲ့ လူ နာမည်
– (ဟိုကပြန်ခေါ်တဲ့အချိန် ရေးထားဖို့) အင်တာဗျူးအချိန်
– Remark ဆိုတဲ့ ကော်လန်မျိုး
စတာတွေကို Mircosoft Excel လေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ် လုပ်ထားပါလို့ပြောတာ။ သူက အဲဒီလောက်မရှင်းထားပါဘူး။ ကိုယ့်တုန်းက အဲလိုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပြတာ။)
၅) အင်တာဗျူးသွားမဲ့ အဝတ်အစား
ရည်ရွယ်ထားတဲ့ အဝတ်အစားကို အလုပ်မလျှောက်ခင်ကတည်းက အကြမ်းဖြင်းကြိုပြင်ဆင်သင့်ပါသတဲ့။ ဘာလို့ဆို အင်တာဗျူးအတွက်ပြန်ခေါ်စာတို့ ဖုန်းတို့ဆိုတာ မျှော်မှန်းတဲ့အချိန်ထက် တိုတောင်းစွာ ရောက်လာနိုင်လို့ပါတဲ့။
(ဒီအဝတ်အစားနဲ့ပတ်သက်တာတော့ ပြောတာများပြီဖြစ်တဲ့အတွက် အကျယ်မရှင်းတော့ပါနော့။)
Reference: Job Searching Guide by Alison Doyle
ခု ဒီ အပိုင်းမှာ ကိုယ်သိနားလည်ထားတဲ့ Cover Letters, Resumes, CV and Employment-related Letters အကြောင်းကို ပြောပြမှာပါ။
မှားတာရှိလည်း ပြင်ပေးသွားပါ။ သိတာရှိလည်း ပြောပြပေးသွားပါနော့။
ကိုယ် ကိုယ်တိုင်ကို အစက လည်နေတာပါ။ နားမဟုတ် မျက်စိလည်နေတာ။ စိတ်ထဲလည်း CV ပေးပြီး ပြီးရောဟာကို အရစ်ရှည်သလေး၊ ဘာလေး ငြိုငြင်ဖူးပါရဲ့။ နောက်တော့မှ ကွဲပြားသွားတာက ဒီလိုလေ။
Cover Letter ဆိုတာက တော့ အလုပ်လျှောက်တဲ့ ကမ်ပနီ/တာဝန်ရှိသူကို ရည်ညွှန်းပြီး ရေးရတဲ့ စာပါတဲ့။ အခြေခံအားဖြင့် ဘာတွေးရေးရမတုန်းဆိုတော့ _
– ဒီ ကမ်ပနီက ဒီ အလုပ်ခေါ်တာကို (သီတင်းစာ/အင်တာနက်) က တွေ့တဲ့အကြောင်း
– ဒီအလုပ်ကို စိတ်ဝင်စားလို့ လျှောက်လွှာပို့လိုက်ပါကြောင်း
– အတူတွဲပါလာတဲ့ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကို ကြည့်နိုင်ပါကြောင်း
– ဒီ အလုပ်တွေကို ဘာလို့ လိုချင်/လုပ်ချင်တုန်း ဆိုတာ စတဲ့ အကြောင်းပြချက်လေးတွေကို စာပုဒ်လေးတွေနဲ့ စီကာစဉ်ကာ ရေးရတာကို Cover Letter ဟု ခေါ်ပါသည်တဲ့ ဗျား။
Resume မှာက _
– ကိုယ်က ဘယ်သူဘယ်ဝါ
– ဘာပညာတတ်၊ ဘာဘွဲ့ရပြီးသားပါ
– ဘယ်လို အလုပ်အတွေ့အကြုံတွေ ရှိပါတယ်
– တခြား အရည်အချင်းတွေက ဘာတွေပါ၊
– တခြား ရည်ညွှန်းချက်စတာတွေကို ဖော်ပြပြီး ရေးထားတဲ့ စာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
Resume နဲ့ Curriculum vitae ဘာကွာလည်း ဆိုရင်တော့ အတို/အရှည်ကွာပါတယ်တဲ့။
နားရှုပ်သွားသလား။ Resume ကို အပေါ်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ၂ မျက်နှာထက်ပိုမရေးသင့်ပါဘူးတဲ့။
CV မှာ ကျတော့…..
– ခုန က အချက်အလက်တွေကို အကျယ်၊ အပြည့်အစုံရေးရမှာပါတဲ့။
– ကိုယ့် ပညာရေးမှာဆိုရင်လည်း Resume မှာကျ ဘာဘွဲ့ ဆိုတာလောက်ရေးပေမဲ့ CV မှာကျတော့ ဘယ်နှစ်ခုနှစ်မှာ ဘယ်ဘွဲ့ကို ဘယ်ဘာသာတွေ သင်ပြီး ရခဲ့တာပါဆိုတာမျိုးရေးနိုင်ပါတယ်။
– ဒါအပြင် ကိုယ်လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ သုတေသန၊ ပရီစန်တေးရှင်း၊ ရရှိဖူးတဲ့ ဆု စတာတွေကို နှစ်အပိုင်းအလိုက်လည်း ရေးလို့ရပါတယ်။
– အလုပ်အကိုင်ပိုင်းမှာလည်း ကိုယ်ရခဲ့ဖူးတဲ့ လုပ်ငန်းကို ပထမ အလုပ်က စလို့ ခု နောက်ဆုံးရတဲ့ အလုပ်ထိ ဘယ်လောက်ကာလလုပ်ခဲ့ရတယ်၊ ဘာတွေလုပ်ရတယ်ဆိုတာ အသေးစိတ်ရေးပေးနိုင်ရင်ကောင်းပါတယ်။
– နောက် ရရှိဖူးတဲ့ ဒီပလိုမာ/ဆာတီဖီကိတ် စတာတွေကိုလည်း စာရင်း စီပြီး ရေးလို့ရပါသေးတယ်။
အကြမ်းဖျင်းလေး ဓာတ်ပုံနဲ့တကွ အောက်မှာ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။။
ရှက်လိုက်တာ၊ ရေးတဲ့ လူကိုယ်တိုင်က ကိုယ့် စီဗီ ကို အပ်ဒိတ်လုပ်ရသေးဘူး..
မောင်လေးဟာ ခဏငှါးလာတယ်။ သူကတော့ လိုတိုရှင်းပဲ။
ကိုယ် CV ပြင်ပေးထားတာကို ရှည်လို့တဲ့။
ရေးပေးထားတဲ့ ကာဗာလက်တာကိုလည်း ဝတ္ထုဆန်သတဲ့။ မုန်းတယ်။
အမှန်တိုင်းပြောရရင် ကိုယ့် အဖို့ တော့
၁) Cover Letter
၂) အပြည့်အစုံ ရေးထားတဲ့ CV
၃) လိုအပ်တဲ့ ဘွဲ့လက်မှတ်တွေနဲ့ ဆိုရင် အလုပ်လျှောက်ဖို့ လုံလောက်ပါတယ်။
ကိုယ်ရတဲ့ ဘွဲ့ လက်မှတ်တွေ များရင် များသလို အလုပ်အတွေ့အကြုံများရင် များသလို၊ ကိုယ်ချဲ့ရင် ချဲ့နိုင်သလို CV က အရှည်ကြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဆိုတော့ ဉာဏ်ရှိသလို လွှာသုံးကြပါကုန်။
References/Recommendation Letters ဆိုတာကတော့ အလွယ် ထောက်ခံစာ လို့ ပဲ ခေါ်ရမလားပဲ။
တစ်ချို့ ကမ်ပနီတွေဆို အရင်အလုပ်တွေက ထောက်ခံစာ၊ ကျောင်းက ထောက်ခံစာတွေ တောင်းတတ်ပါတယ်။
အရင် အလုပ်ကတောင်းရမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်ဘယ်လို အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်၊ ထွက်ခဲ့တယ်၊ အလုပ်လုပ်တဲ့ သက်တမ်းတလျှောက် ဆက်ဆံရေး စတာတွေအပေါ်မူတည်ပြီး ရေးပေးချင်တဲ့ သူရှိတယ်။
ကိုယ် ရေးချင်တာတွေ ရေးပြီးနောက်မှာ..
မြဝတီသီတင်းဆိုတဲ့ ဖဘ စာမျက်နှာပေါ်က ရထားတဲ့ CV ရေးနည်းကို တင်ပါရစေ။
အင်တာဗျူးသွားကြမယ် (၁) တုန်းက ကော်မန့်ထဲမှာပဲ ရေးလိုက်တာမို့ ခုသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ အောက်မှာ တစ်စုတစ်စည်းထဲထားချင်လို့ပါ။
မြန်မာပြည်နဲ့များ ပိုကိုက်ညီမလားလို့ ပေါင်းထည့်ပေးလိုက်တာပါ။
အချို့ ကျတော့လည်း အချက်အလက်တွေ များပေမယ့် လိုချင်တဲ့ အချက်အလက်ကို မရောက်ရပြန်ပါဘူး။
ကုမ္မဏီ တော်တော် များများကတော့ အလုပ်လျှောက်သူ တင်လာတဲ့ ဆီဗီ အပြင် သူတို့ Format ဆီဗီကိုပါ ထပ်ဖြည့်ခိုင်းတဲ့အခါမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ အစကတော့ အင်တာနက်ကနေ ရှာရှာဖွေဖွေနဲ့ ဟိုလိုလေးရေးရင် ကောင်းမလား၊ ဒီလိုလေး ရေးရင် ကောင်းမလားလို့ စဉ်းစားရတာမျိုး ရှိပါတယ်။
၁။ အမည် – ဒါကတော့ မေးနေစရာတောင် မလိုပါဘူး။ အမည်မပါတဲ့ ဆီဗီဆို CV လို့တောင် မခေါ်ပါဘူး။
၂။ အဖ အမည် – ဘာရယ်လို့တော့ မဟုတ်ဘူး။ CV မှာ အဖ အမည်ကတော့ ထည့်ထည့်ရေးတာ ဟိုးအရင် ကတည်းက နိုင်ငံတကာ စံညွန်း ဖြစ်ပါတယ်။ အမိ အမည်တောင် အချို့  CV မှာ ထည့်ပေမယ့် အချို့  CV မှာကျ မလိုအပ်ပါဘူး။
၆။ အိမ်ထောင်ရှိမရှိ – ဒါကလည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ဥပမာ – မိသားစု ကြောင့် အလုပ်အပေါ် ဂရုစိုက်နိုင်မှု ရှိမရှိကို သိချင်တာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
၇။ ပညာအရည်အချင်း – ပညာအရည်အချင်း ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကို ကြည့်ပြီးမှ အလုပ်တစ်ခုက သင့်တော်မတော် ရွေးချယ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာက အရေးကြီးဆုံးလို့ဆိုလဲ မမှားပါဘူး။ ကိုယ်လုပ်မယ့် အလုပ်နဲ့ အဆင့်မှီတဲ့ ပညာအရည်အချင်း ရှိမရှိကြည့်ကြတာ မို့ ဖြစ်ပါတယ်။
Good, Fair, Very Good တိုလို သတ်မှတ်ရတာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက Typing skill။ ဒါကတော့ နည်းပါတယ်။ Typing speed ဖြည့်ရတာက စာစီစာရိုက်များများ လုပ်ရတဲ့ အလုပ်တွေမှာကျ ထည့်ခိုင်းတတ်ပါတယ်။ မလိုအပ်ရင်တော့ တကူးတက ထည့်စရာမလိုပါဘူး။
၁၀။ ကျွမ်းကျင်သော အလုပ် – Job Interested (စိတ်ပါဝင်စာ:သော အလုပ်) လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ ဒီမှာကျ ကိုယ် ဘာတွေလုပ်နိုင်တယ်။ ဘယ်လိုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကို အတိုဆုံး၊ အလွယ်ဆို ဝါကျနဲ့ရေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
၁၄။ ဝါသနာ – ( Persoanal Interset) လို့ရေးတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဒီမှာကျ တကယ်ပဲ ကိုယ်ဝါသနာ ပါတာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရေးလို့ ရပါတယ်။ ဥပမာ – ရေကူး၊ ဘောလုံးကန်၊ ရုပ်ရှင်ကြည့် အစရှိသဖြင့်ပေါ့။
Google Search မှာ Standard CV Form Download လို့ စာရိုက်ပြီး ကိုယ်စိတ်ကြိုက် တွေ့ရာ ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ထဲမှာမှ ကိုယ့်နဲ့အသင့်တော်ဆုံးလို့ ထင်တဲ့ဟာကို ရွေးပြီး download ဆွဲလို့ ရေးသားဖြည့်ဆွက် နိုင်ပါတယ်။ အများကြီးလည်း မလိုအပ်ပါဘူး။
Simple CV လို့ရိုက်ရှာပြီးလည်း ဖြည့်နိုင်ပါတယ်။ သို့တည်းမဟုတ် ကိုယ်က Excel တတ်ထားတယ် ဆိုရင် Excel ဖိုင်တစ်ခုဖွင့်လို့ ကိုယ့် ဆီဗီ ကိုယ်အဆင်ပြေသလို ဖြည့်ဆွက်တာလည်း အကောင်းဆုံးပါပဲ။
ဒီမှာ အများကြီးခေါင်းစားစရာမလိုပါဘူး။ ကုမ္မဏီတော်တော်များများက ကိုယ်ပိုင် CV Format ရှိပါတယ်။ ကိုယ်တင်လိုက်ပြီး နောက်တစ် ခေါက် ကတော့ ထည့်ဖြည့်ရအုံးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ်တင်လိုက်မယ့် ရှေ့ ပြေးဆီဗီက အထက်ပါ ပြထားတဲ့ အချက်လေးတွေနဲ့ ဆိုရင်တောင် လုံလောက်ပါတယ်။
ကိုယ့်ကို Recommend ဘယ်သူပေးတာ လည်းဆိုတာ ကိုလည်း လိုအပ်မယ်ထင်ရင် ထည့်ရေးနိုင်ပါတယ်။ Signature (လက်မှတ်)ကိုလည်း CV အပိတ်မှာထိုးနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ အများကြီး အတွေးရှုပ်နေစရာ မလိုပါဘူး။
အထက်ပါ အရေးကြီး အချက်အလက်ပါတဲ့ ဖောင်ကို အရှင်းလင်းဆုံး ပြုလုပ် သို့မဟုတ် download ဆွဲပြီး လုပ်မယ်။ အင်္ဂလိပ်စာမှန်မှန်နဲ့ သေချာဖြည့်ဆွက် မယ်ဆိုရင် လုံလောက်ပါပြီ။ ဒါဆိုရင် သင့်လျော်ပါပြီ။
ရိုးရိုးနဲ့ ရှင်းရှင်းပြောရရင် လုပ်ငန်းရှင်တွေ CV တစ်ခုကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် အဓိကထားမှာက ပညာအရည်အချင်း၊ အသက်၊ အရင်လုပ်ခဲ့တဲ့ ကုမ္မဏီ၊ မျှော်မှန်းလစာ တို့လောက်ပါပဲ။ သို့ပေမယ့် ပြည့်ပြည့်စုံစုံရေးပို့ရမှာကတော့ ကိုယ့်တာဝန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလောက်ဆို ကိုယ်နိုင်အဆင်ပြေမယ့် အလုပ်လျှောက်လွှာရေးနိုင်ပြီလို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
Credit: Myawady News’s
ဒီလောက်ဆို အင်တာဗျူးသွားမယ်ဆိုရင် သိရမဲ့ ပြင်ဆင်ရမဲ့ အကြောင်းတွေ စုံပြီထင်ပါရဲ့။
CV မှာ နောက်ဆုံး တစ်ချက် ကျန်သေးတယ် … အောက်ဆုံးမှာ ကိုယ့် ဆိုင်း ထိုးဖို့ မမေ့ ပါနဲ့ ။။
KZ ရေ .. အဲ့ဒီ့ မြန်မာပြည်က cv တွေ နဲ့ ပါတ်သက်ပြီးရေးထားတာ နှစ်ပေါက်သွားပြီး ဆက်မရေးမိဘူး ။စိတ်ပြန်လည်တဲ့ တစ်နေ့ တော့ ပြီးအောင် ရေးဦးမယ် ။ အခုလို တင်ပေးတာ ကျေးကျေးပါ ။
cv တင်ထားပြီး ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာ မှာ ပေးထားတဲ့ ဖုန်းက ခေါ်လိုက်ရင် အဲ့ဒီ့လူ ကို မသိဘူး ဆိုတာတွေ အရင် က အများကြီး ။ ( အခုတော့ ဖုန်း နဲနဲပေါလာတော့ အဲ့ဒီ့ ပြဿနာ သိပ်မတွေ့ ရတော့ဘူး)
မြန်မာပြည်မှာ တော့ CV ကို အင်္ဂလိပ် လို ရေးစရာ မလိုဘူးထင်ပါသည် ။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ရေးပြီး ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဘာ မှန်း မသိကြတာ တွေ အများကြီးတွေ့ဖူးပါတယ်။ ကိုယ်က တကယ်အင်္ဂလိပ်လို တတ်ကြွမ်းရင်တော့ အကြောင်းမဟုတ်ဘူး ။ အင်္ဂလိပ်လိုရေးကြ ။ ပြီး အင်္ဂလိပ်လို fluent ဖြစ်ပါတယ် ဆိုပြီးထည့် ကြ ။ interview မှာ ခွေးအ ကြီးတွေ ဖြစ်ကြ ။ ကျွန်တော့သူငယ်ချင်းက အဲ့ဒီလိုရေးလို့ လိုက်ရေးတာပါ ပြောကြ ဆိုတော့ ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ်လျှောက်တဲ့ ကုမ္မဏီ ပေါ်မှာ မှုတည်ပြီး မြန်မာလို (သို့) အင်္ဂလိပ်လို ရေးမလားဆိုတာ ဆုံးဖြတ်သင့် သည် ထင်ပါကြောင်း ။
မြန်မာပြည်မှာက မိတ္တူ ဆိုင်ကဘဲ ကူးပြီးရေးတင်တာ များတော့ ပေါက်တတ်ကရ အတော်များတာ ။။
ကျန်သွားလို့ နဲနဲထပ်ပွားလိုက်ဦးမယ် .. ကာဗာ letter ထည့်သင့် ပါကြောင်း ။ အဲ့ဒီ့မှာ ကိုယ်ပေးနိုင်တဲ့ ဂတိမျိုးပေးတာ ဟာ ပိုမိုဆွဲဆောင်မှု့ ရှိပါကြောင်း .
ဲဥပမာ … အချိန်မရွေး ခရီးထွက် နိုင်ပါကြောင်း ။ မည်သည့်ဒေသမဆို တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ပါကြောင်း ။ အရက်သေစာ ကွမ်းမစား အလွဲသုံးစား မလုပ်ပါကြောင်း (လိမ်ညာပြောတတ်တာလေးဘဲ ရှိပါကြောင်း .. :hee:)ငါးပါးသီလကို ခါးဝတ်ပုဆိုးကဲ့သို့ ခဏခဏ ပြင်ဝတ်ပါကြောင်း စသဖြင့် ဟာ တာဝန်ရှိသူ တွေမှ မိမိ interview ခေါ်မည့် စာရင်းထဲ ထည့် ဖို့ ဆွဲဆောင်နိုင်ပါကြောင်း ။ :hee:
လိုအပ်တာတွေ ဖြည့်ပေးသွား၊ သိတာလေးတွေ ဝေမျှသွားတာကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ။
ကျနော်က ဘာသာပြန်ထားတာမို့ နည်းနည်း မြန်မာနည်း မြန်မာဟန် မကိုက်တာတွေရှိမှာပါ။။
နောက် လိုအပ်တာလေး သတိရရင် လာပြောပါဦးလို့။
ကာဗာ လက်တာ လိုအပ်ကြောင်းကတော့ ကိုယ်တွေ့မို့ ထောက်ခံပါရစေ။
ရေးဖို့ လိုအပ်တာတွေကိုပါ ပြောသွားတာလည်း ထပ်ဆင့်ကျေးဇူးတင်ရပါ၏။
တား တစ်ခုလောက် နမူနာ ရေးကျိမယ်နော် ..
မှန်လားလို့ စစ်ပေးဘာအုံးရို့ …
အမည် – သဂျား
အဖအမည် – မသိ (လမ်းဘေးက ကောက်ရ)
မွေးသက္ကရာဇ် – မသိ (ကောက်ရချိန်က လမိုက်ည)
မှတ်ပုံတင်နံပါတ် – အခုထိ မလုပ်သေး
ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ – မွတ်စ်
အိမ်ထောင် ရှိ၊ မရှိ – ကလေး ၆ ယောက်ရှိ
ပညာ အရည်အချင်း – ကြက်ချေးတန်း
ဘာသာစကား – သူများနားမလည်သော စကားကို ကျွမ်းကျင်စွာပြောတတ်။
သဂျား။ နာ မပါဘူးနော်။
တူ ကျောလို့ လိုက်ကျောမိဒါရယ်။
အမည်- မဟာဘာဂျာ အန်ချာဒုန်း
အဖအမည်- ရှာဖွေဆဲ (မသိရင် မသိသလိုနေ)
မွေးသက္ကရာဇ်- နှစ်ဆယ်ရာစု (ပိုတိကျချင်ရင် နှစ်တစ်ရာ ပြက္ကဒိန်ယူလာခဲ့)
မှတ်ပုံတင်အမှတ် – လ၀ကကို သွားမေး
ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ – ဟိန္နူအစ မွတ်စ် အဆုံး
ပညာအရည်အချင်း – ရေးတတ်ဖတ်တတ်
အိမ်ထောင် ရှိ/ မရှိ – လူပျိုသိုး (မစွံကြောင်း အထူး အာမခံ)
ရရှိခဲ့သော ဘွဲ့များ – ရှင်ပုညာစာရ (ဘဂျီးဘုန်းကြီးကျောင်း)
ထူးချွန်သော အရည်အချင်း – စကားမပြောဘဲ မရ ရအောင် ရန်စတတ်သည်
ဘာသာစကား – လက်ဟန်ခြေဟန် အထူး ကျွမ်းကျင်သည်
မယုံကြရင် အဲဒီ အန်စာတုံးသာ မေးကြပါခင်ဗျ။
:harr: :harr: :harr: :harr:
အလုပ်ကတော့ ကုမ္ပဏီနှစ်ခုမှာပဲ လုပ်ဖူးသေးတယ်.. ပထမအလုပ်ကတော့ အစ်မတစ်ယောက်လုပ်နေတဲ့ရုံးဆိုတော့ အမွန့် CV ကို သူပဲ ပြင်ပေးလိုက်တာ..အလုပ်ကလည်း ခန့်မှာသေချာနေတော့ ဘာမှသေချာမပြင်လိုက်ဘူးရယ်… သနားဖို့ကောင်းတာက certificate ပဲ.. ကွန်ပျူတာဆိုတာလည်း ဘာသင်တန်းမှ မတက်ဖူးဘူး.. အစက အိမ်မှာအဖေသင်ပေးလို့တတ်တယ်..နောက်ကျ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်လိုက်ကလိရင်းတတ်တယ်..ရှိတာဆိုလို့ English communication skill ဆိုတဲ့ လက်မှတ်လေးတစ်ခုပဲရှိတယ်..ကျောင်းပြီးခါစဆိုတော့ ဘွဲ့ထောက်ခံစာလေးနဲ့..အားလုံးပေါင်းမှ (၃) ရွက်ရယ်..
နှစ်နှစ်လောက်လုပ်ပြီးတော့ အလုပ်ပြောင်းတော့ ကိုယ့် CV ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ပြင်ရတော့တာပဲ.. Business English စာအုပ်ကြီးကိုဖတ်ပြီး ဖြတ်ညှပ်ကပ်လေး လုပ်ရတာပေါ့.. ဟီး..အစ်မပြောသလိုပဲ..ဘယ် ပို့စ် ကို လျှောက်ချင်ပါတယ်… ဘာအတွေ့အကြုံတွေရှိပါတယ်.. ဘာကို စိတ်ဝင်စားပါတယ်..ဘာတွေလုပ်တတ်ပါတယ်… ဘယ်လိုလုပ်နိုင်ပါတယ်.. ဘာညာသာဓကာကို (အဲ..ခန့်မှန်းလစာလည်းပါတယ်..) အဲ့ဒါတွေကို cover letter ထဲထည့်ရေး..ပြီးရင် resume တစ်ခုနဲ့တွဲပေးလိုက်တာပဲ…
resume ထဲမှာလည်း အပိုတွေထည့်မရေးဘူး.. ဥပမာ.. ကျား/မ ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့… နာမည်ကိုပြောထားမှာတော့ မိန်းကလေးနာမည်ဆိုတာ သိပြီးသား.မွေးသက္ကရာဇ်ပြောထားရင် အသက်ဘယ်လောက်ဆိုတာ သိပြီးသား..အဲ့ဒါမျိုးတွေ အကုန်ဖြုတ်တယ်.. education ကို သေချာရေး.. other qualification ကို သေချာရေး… အောက်ဆုံးမှာ reference ဆိုပြီး ရာထူးကြီးကြီးနဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အဒေါ်နာမည် ထည့်ပေးလိုက်တယ်…
မွန်မွန်ကလေးရဲ့ ကိုယ့်တွေ့ အတွေ့အကြုံလေးနဲ့ အားဖြည့်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ်။
နောက် စိတ်ပါမှ ဘီးဇီးနက် အင်္ဂလိပ် ကို ရေးဦးမယ်။
ပထမဆုံး အတည် မန့်မယ်
ပြီးမှ စာရင်း ရှင်းမယ်
အလုပ်လျှောက်မယ်ဆို CV ပဲ လိုတယ်လို့ ထင်နေတာ ဟိုအရင်ကတည်းက
အခုထိလဲ ဘာမှ မသိသေး…………….
ပထမ တစ်ခု ကာဗာ လက်တာက မတွေးမိဘဲ လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ် (တော်သလား မမေးနဲ့ )
နောက်တစ်ခု resume ကတော့ ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ် မိတ်ဆက်ခြင်းပေါ့လေ (နားလည်သလိုပြောတာ)
တတိယ စီဗွီကတော့ မရှိမဖြစ် လိုတယ်လို့ မှတ်ထားတယ်။
နောက်ဆုံးတစ်ခု reference အတွက်ကတော့ အနန္တော အနန္တ ငါးပါးထဲမှာပါတဲ့ ဆရာသမားတွေကို အပူကပ်မယ်ဆိုရင်
မရရင်တော့ စာရေးသူ တာဝန်ပါခည :hee:
ကြည့်ပြီး ပျင်းတယ်ဆိုတော့ ရေးရကျိုးနပ်တာပေါ့နော်။
ကျုပ် ကိုယ်ပိုင်လျှာက်လွှာထဲဖြင့် ထောက်ခံစာတောင်မပါဘူးရယ်။
အကြောင်းသိ ဆရာတွေ စီနီယာတွေ လက်ရှောင်ခဲ့လို့။ မုန်းဒယ်။
သကြား အလုပ်မရရင် နတ်သမီးတစ်ထောင်ကို ဟိုလိုလေးတွေ ဝတ်စားပြီး အလုပ်လျှောက်ခိုင်းလိုက်။
သကြားက သူတို့ လစာ ထိုင်စားရုံပဲ။
ကြည့်ပြီး ပျင်းရတာက အရင်ကတည်းက စာရွက်စာတမ်း ပြင်ဆင်ရမှာ အလွန်ပျင်းသူမို့ပါ။ :hee:
နတ်သမီး တစ်ထောင်ကိုတော့ အခု မောဒယ် အေဂျင်စီကို ပို့ထားတယ်။
ခုနောက်ပိုင်း နတ်ပြည်မလဲ စီးပွားရေးက မကောင်းလို့
ဦးရီးတို့ဆီမှာတော့ Personal Particulars ကိုထည့်မရေးကြတော့ဘူး။
Work experience ကလည်း current job ကို အရင်စရေး
်first job ကိုနောက်ဆုံးမှရေးရတယ်။
သိဘူးဗျာ စီဗွီနဲ့ ရယ်ဇူမေးက အတူတူပဲ မှတ်နေတာ။
Excel မှာရိုက်ဖူးဘူးဗျ။ Word မှာပဲရိုက်ဖူးတယ်။စမ်းကြည့်အုံးမှ။
အဲဒီ အစဉ်လိုက်ကို ပြောဖို့မေ့သွားတယ်။ သတိပေးဖော်ရတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးပါ။
ရ ထားတဲ့ဘွဲ့ဆိုရင် – – – အမြင့်ဆုံး ဒီဂရီကနေ ဒီပလိုမာ၊ ဆာ့(ဒ) စဉ်ပြီး ဖော်ပြလေ့ရှိပါတယ်။။
အလုပ်အတွေ့အကြုံမှာဆိုရင် – – – ခု လက်ရှိ အလုပ်ကနေ စရေးပြီး ပထမဆုံး အလုပ်ထိ အစဉ်တိုင်း ရေးလေ့ရှိပါတယ်။
Personal Particular တော့ မဖြုတ်ဖြစ်သေးဘူး။
ကျနော်ကတော့ စီဗီကို word ထဲ ရိုက်တာများပါတယ်။
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင် သတိပေးတာ ဟုတ်ဘူးဗျ။ ကျုပ်က ဒီက ပုံစံပဲသိလို့ တူမကြီးတို့ ဖက်ကနဲ့ မတူဘူးလားလို့
Excel နဲ့ရိုက်တာတော့ စင်ကာပူက ပြောင်းလာတဲ့ သယ်ရင်းတစ်ယောက် ဦးရီးအတွက်စီဗွီရိုက်ပေးတုန်းက ပြောဖူးတယ် ဒါပေမဲ့ သူနောက်နေတယ်ထင်တာ။ကြည့်ရတာ Excel နဲ့ကပိုလွယ်ပုံရတယ်။
LinkedIn Profile ဆိုတာလည်း တူမရီးပြောမှကြားဖူးတာဗျာ။ :hee: ပြီးမှ ၀င်လေ့လာကြည့်အုံးမယ်။
အရင်လိုပါဘဲ SAVE ထားလိုက်ပါ၏။
ဟိုးတလောက စကတ်ကြီး အမျိုးသားတစ်ဦး လိုတဲ့အလုပ်တစ်နေရာဆိုတာ အခု လိုနေသေးလား ပြန်စုံစမ်းပြီး ဒီပိုစ့်ပါ မဟာဗျုဟာတွေနဲ့ သွားဖြေအုံးမှဘဲ။
အလုပ်ရရင်ရ မရရင် ပိုစ့်ပိုင်ရှင်ကိုပြန်ပြီး ကွန်ပလိန်းတက်ရမယ် မစုံသေးလို့ ဒီမှာအရွေးမခံရဘူးလို့ ….။
ငါးကြင်းဆီနဲ့ ငါးကြင်းပြန်မကြော် ကြေး။
အလုပ်မရတဲ့ လူတွေ တာဝန်ယူနေရင် မလွယ်ပါလား။
ပြန် ကွန်ပလိန်းမယ်ဆိုတဲ့ လူချည်းပဲ။
သင် ဒီအလုပ်မရရှိခြင်းသည် ဒီထက်ကောင်းတဲ့ အလုပ်တစ်ခုက သင့်အားစောင့်နေလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် မိတ်ဆွေ၊ အားမလျော့ဘဲ ဆက်လက်ဖြေဆိုပေးပါတဲ့။
( ကွန်ပလိန်းများအတွက် ဖြေရှင်းစရာ စကားလေးနော် – တစ်ယောက်ကို ပြောဖြစ်တိုင်း မူပိုင်ကြေးပေး ရမှာနော် KZ ရေ။ )
(၂၁)မျက်နှာရှိသော CV နှင့် Cover Letter (၂)မျက်နှာပါသော…
လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁၃)နှစ်ရှိသော CV ကြီးအား… ပြန်လည်ချပြရန်… အတော်အတန်ဝန်လေးနေသော
သူတစ်ယောက်အား… အသင်မည်ကဲ့သို့ ကယ်တင်နိုင်မည်နည်း…
နီးရင်တော့ စိတ်ညစ်ပြေအောင် စကား ဟိုပြော ဒီပြော ပြောပေးလို့ရပါရဲ့။
ုအကျိုးများတဲ့ ပိုစ့်လေးမို့ ဦးဏှောက် မနိုင်၍ ဘုတ်မာ့ခ် လုပ်ထားပါကြောင်း။
ဘီးဇီးနက် အင်္ဂလိပ် ကိုလည်း စောင့်မျှော်နေပါကြောင်း။
ဘာမဟုတ်တဲ့ အရောင်းအ၀ယ်စကားလေး တစ်လုံးနှစ်လုံးတောင် ပြောမထွက်လို့ …
ပျင်းရိထုံထိုင်းနေတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ပကတိ အခြေအနေမှန်ကို သိရှိပြီးသကာလ အကြီးအကျယ်စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းနေရာမှ ကယ်တင်ရှင်တွေ့ပြီဟု…….. :hee:
ကယ်တင်ရှင်ဆိုပြီး ပုံပြီး အားမကိုးပါနဲ့ရယ်။
လာမယ်၊ ကြာမယ်။ ပျင်းတယ်။
မမခိုင်ဇာရေ .. ပြောရင်ယုံပါ့မလားမသိ
ခုအလုပ်မှာလေ အလုပ်စဝင်ပြီးမှ CV ပေးဖြစ်တယ်
အားကစားဝတ်စုံနဲ့ စက်ဘီးပတ်စီးနေတုန်း ခုလက်ရှိဘော့စ်နဲ့တွေ့တာ .. အဲမှာပဲ သူနဲ့အတူပါလာတဲ့မိတ်ဆွေက မိတ်ဆက်ပေးလို့ စကားပြောဖြစ်တယ်..
ကိုယ်က တခြားမှာလုပ်နေတုန်း ထွက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပေမယ့် ထွက်စာမတင်ရသေး ..
ပေးတဲ့လစာလည်း ကျေနပ်တယ်ဆိုတော့ အိုကေပေါ့
ခုတော့ လုပ်သက်က လေးနှစ်နီးပါး .. အလုပ်ထဲမှာကို ၃နေရာလောက်ပြောင်းပြီးပြီ
စပြောတာက စက်ကပ်ကြေးလုပ်ဖို့ ..
အဲဒါတော့ မလုပ်နိုင်ပါ စိတ်မဝင်စားပါဆိုပြီးငြင်း ဒါနဲ့ PR ဘက်ရောက်သွားရော ..
ဒါမျိုးကတော့ Reference/Recommendation ကောင်းလို့ လို့ပဲ ပြောရတော့မယ် ထင်ရဲ့။
စွတ်ကျယ်ချိုင်းပြတ်နဲ့ ဆိုက်ကားနင်းနေတုန်း မာဆက်ကထွက်လာတဲ့ ခုလက်ရှိဘော့စ်နဲ့တွေ့တာ ..
အဲမှာပဲ သူနဲ့အတူပါလာတဲ့မိတ်ဆွေက အရက်ဝယ်ခိုင်းလို့ ၀ယ်ပေးရင်း စကားပြောဖြစ်တယ်..
ကိုယ်က အုံနာခနဲ့ စဘော်အနိုင်နိုင်မို့ ထွက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပေမယ့် ဖဲကြွေးက မကျေသေး..
ခုတော့ လုပ်သက်က လေးနှစ်နီးပါး .. အလုပ်ထဲမှာကို (ပန်းကန်ဆေး၊ မီးသွေးအိတ်ထမ်း ၊စားပွဲထိုး)၃နေရာလောက်ပြောင်းပြီးပြီ
စပြောတာက မာလီ လုပ်ဖို့ ..
အဲဒါတော့ မလုပ်နိုင်ပါ စိတ်မဝင်စားပါဆိုပြီးငြင်း ဒါနဲ့ မီးဖိုချောင် ဘက်ရောက်သွားရော ..
ဘာပြောရမှန်းကို မသိတော့ပါ ဖားဂီရယ်။
အကုန်ခိုင်းနိုင်တယ် ဆိုတော့ အဲ့ဒီ သူဌေးက ဘယ်သူများပါလိမ့်။